Ny trosan'ilay sinema amin'i John Alvin | Famoronana an-tserasera
Tao anatin'ny folo taona lasa nila fanoharana avo lenta mba hanehoana an'ireto afisy ireto amin'ny sarimihetsika Hollywood ary amin'ireo mpanakanto ireo dia ahitantsika ny toetran'ny Struzan na Richard Amsel.
Ireo dia efa nikarakara asehoy ireo nofy sy tantara ireo, izay ahitantsika an'i John Alvin ihany koa ho ilay nitondra afisy manana kalitao goavambe hihaonana amin'ny mpamorona ny Blade Runner na ilay vahiny nilaza fa "ET, tranoko, telefaona."
Gremlins, The Lion King, Beauty and the Beast, Blade Runner, The Color Purple, ET the Extraterrestrial, The Goonies, The Little Mermaid, Cape Fear na Young Frankenstein dia ny sasany amin'ireo horonantsary tsy tambo isaina nasehony ary izany dia efa nandalo ny retina azontsika rehefa nandeha nijery azy ireo tamin'ny sarimihetsika taona lasa isika.
Raha mijery ny sary mihetsika rehetra nasehonao ianao dia azonao atao ny gaga amin'ny mpanakanto mpanao sary, izay azo antoka fa tsy nahafantatra ny anarany dia tena zava-dehibe tokoa hanamafisana ny fahatsapana iza no nahazo ireo sarimihetsika ireo tamin'ny fiainantsika, na ilay antsoina hoe kolotsaina malaza.
Maherin'ny 25 taona any an-damosin'izy ireo ka tamin'ny 2008 dia nandao antsika tamin'ny faha-59 taonany. Fomba iray hanaovana fahatsiarovana mahafinaritra ny maha-zava-dehibe ny borosinao sy ny asanao kanto.
Asan'i Alvin dia ao amin'ny galeriana kanto isan-karazany any Etazonia izay ahitan'ny sombiny, ny sary ary ny fanontana voafetra an'io sanganasa mahatalanjona io izay nanakoako ny teny hoe "sinema".
Amin'izany dia manandrana manasongadina izany koa aho ao ambadik'ireo mpilalao sy talen'ny malaza ireo, misy ekipa mpamokatra iray izay mamela ny ozinina nofinofy izay i Hollywood hanohy hanome aingam-panahy na aiza na aiza no hamoahana sy ahitàna ny sarimihetsika.
Sary hafa tokony homena betsaka, fa ao amin'ny Star Wars izao rehetra izao, McQuarrie.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny trosa sinema any Hollywood amin'i John Alvin sy ny afisy sarimihetsika malaza